NISA oo soo bandhigtay raggii ka dambeeyay dilka Suxufiyadda Hindiya Xaaji – STAR FM SOMALIA
NISA oo soo bandhigtay raggii ka dambeeyay dilka Suxufiyadda Hindiya Xaaji
Hay’adda Nabad Suggida & Sirdoonka Qaranka (NISA), ayaa waxay soo bandhigtay laba nin oo sida la sheegay ka dambeeyay dilka Suxufiyadda Hindiya Xaaji Maxamed, oo ka tirsaneyd Warbaahinta Dowladda.
Hindiya Xaaji waxaa la dilay 3-dii bishi hore ee December, markii walxaha qarxa loogu soo xiray gaarigeedii, xilli ay mareysay wadada Taleex ee Degmada Hodan. Hindiya oo markaasi si xun ugu dhaawacantay qaraxa, ayaa waxay kolkii dambe ugu geeriyootay isbitaalka Madiina.
Raggan oo lagu soo bandhigay mid ka mid ah xabsiyada ay Hay’adda Nabad Suggida ku leedahay Magaalada Muqdisho, ayaa waxaa lagu kala magacaabaa C/risaaq Maxamed Barrow (Macalin Maxamed) iyo Xasan Nuur Cali (Sheekh Aweys).
Nabad Suggida, ayaa waxay 5-tii December ee Macalin Maxamed ku qabatay Isgoyska ZM0, xilli uu la socday gaari BL ahaa, isaga iyo laba nin oo kale, waxaana suurtagashay in 6-dii bishaasi gacanta lagu soo dhigo Sheekh Aweys.
Macalin Maxamed wuxuu qirtay in uu ahaa ninkii miinida ku xiray gaarigii Suxufiyadda, halka Sheekh Aweys uu isna qirtay inuu ahaa ninkii miinida u keenay Macalin Maxamed, walow uu Sheekh Aweys ku andacooday inaanu waxba kala socon in bacdii uu miinada ku keenay, inay miino ku jirtay iyo in kale.
Iyadoo Macalin Maxamed sida uu sheegay ay wada socdeen, xilligii uu miinada ku xiraayay gaarigii marxuumadda, ayuu hadana Sheekh Aweys ku adkeystay inaanu ogaynba, wixii ku dhex jiray bacdii uu u geeyay Macalin Maxamed, maadaama sida uu sheegay ay ahayd alaab ay dad kale ugu soo dhiibeen.
Raggan, ayaa ku kulmi jiray Garoomada Conis & Luujino, goomiiste ku yaala Degmada C/casiis Xeebta Liido iyo maqaaxi lagu magacaabo Faay Baasto, mudadii la diyaarinaayay sidii lagu qaarajin lahaa Suxufiyadda.
Macalin Maxamed, ayaa wuxuu dalbanayaa in la cafiyo, si loo badbaadiyo dadka inta nool, isagoona isu sifeeyay nin keeni kara illaa xad xoggo looga hortaggi karo kuwa dadka dilaaya.
“Fal waa dhacaa, towbadana waxaa aqbala Ilaahay keligii in la’iskakey cafiyo, si aan dowladda ugu shaqeeyo. Qof dhintay ma soo laabanaayo, laakiin dadka nool inaan badbaadiyo, si wixii aan badbaadin karo, xog aan keeni karo, waa keeni karaa illaa xad. Haddii la’i cafiyo oo cafis helo, waan shaqaynayaa, si waxaan u shaqaynayaa hagar la’aaneed.” Ayuu yiri Macalin Maxamed.